saingy tsy avotra noho ny ratra mafy. Izany no vokatry ny loza mahatsiravina nitranga tamin’ny lalan’ny kaominina Ambongamarina, distrikan’Anjozorobe. Samy kodiaran-droa izy ireo no nifandona vokatry ny fandehanana mafy tao anaty fiholahana sy fangalaran-dalana. Ny alakamisy teo, tamin’ny 10 ora atoandro no nifanehitra teo Tsiakafandra, fokontany Ambohitaomina, tamin’ny lalana mampitohy an’Ambongamarina sy Anjozorobe ireo môtô cross roa. Tsiahivina fa andro mahabetsaka ny mpampiasa lalana noho ny andro tsy fiasana amin’iny faritra avaratry ny faritra Analamanga iny sady tsenan’ny renivohitry ny distrika ihany koa. Samy tao anatin’ny heriny ireo kodiaran-droa ireo izay samy vaovao, ny iray marika “Mada moto” aza mbola mitondra laharana “WWT” saingy potika tanteraka avokoa hatramin’ilay iray marika “France rider”. Avy ao amin’ny kaominina Ambongamarina avokoa ireo mpanamory. Avy ao Tsiakafandra Ambohitaomina nisehoan’ny loza ny lehilahy iray 34 taona nitondra ilay “Mada moto” ary ilay raim-pianakaviana 46 taona nitondra “France rider” kosa avy ao Ambodiaviavy. Ny zandary avy ao amin’ny tobim-paritra Anjozorobe no nandray an-tanana ny raharaha.